Dhageyso:Wasaaradda Ganacsiga Iyo Warshadaha DGKGS oo Tababar lagu baranaayo Hormarinta iyo Maareynta Ganacsiga u qabatey qaar kamid ah ganacsatada Baydhabo. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dhageyso:Wasaaradda Ganacsiga Iyo Warshadaha DGKGS oo Tababar lagu baranaayo Hormarinta iyo Maareynta Ganacsiga u qabatey qaar kamid ah ganacsatada Baydhabo.
written by Siid Cali 23/03/2020
Wasaaradda Ganacsiga iy warshadaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kaashaneysa Hey’adaha EDU iyo UNEDO Ayaa magaalada Baydhabo waxay ku qabteen wajiga koowaad ee tababar ay ka faa’ideysan doonaa ilaa 100 ganacsato reer Koonfur Galbeed ah oo ay ku baran doonaan habka ganacsigooda u hormarin lahayeen.
Wajiga koowaad ee tababarkaan ayaa waxaa ka qeyb galey wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xil Mohamed Ali Hassan, gadoomiyaha iskaashatada gobolka Bay, madax ka socotey hey’adaha EDU iyo UNEDO fadhigeeda Baydhabo.
Jamiila Haji iyo Hussien Hassan oo ugu ka tirsan mas’uuliyiinta hay’ada EDU ayaa ka warbixiyey tababrkaan.
Gadoomiyaha rugta ganacsatada KGS mudane MOhamed Ali Nor ayaa sheegey iney ka rug ahaan muhiim u yahay ayna ka faa’ideysan doonaan.
Gababadii waxaaa tababarka daahfurey wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mohamed Ali Hassan, isagoo sidoo kale ka hadley muhiimada ganacsiga iyo faa’idada barnaamijkaan,
Waxaa barnaamijka ka faa’ideysan doonaa ilaa 100 ganacsato reer KGS, wuxuuna noqon doonaa ilaa 3 waji.
Dhageyso:Wasaaradda Ganacsiga Iyo Warshadaha DGKGS oo Tababar lagu baranaayo Hormarinta iyo Maareynta Ganacsiga u qabatey qaar kamid ah ganacsatada Baydhabo. was last modified: March 23rd, 2020 by Siid Cali
Dhageyso: Sida laga soo xiganaayo radio kulmiye ee magaalada muqdisho beesha hawiye oo loo balan qaaday madaxweyne kuxigeenka kg iyo xubno kale.
Dhageyso+Sawirro:- Maamulka Baardheere oo Xariga ka jarey Ceel Biyood ku Shaqeynaya Soolarka Cad Ceeda
Akhriso:-Taliska Mareykanka ee Africa oo sheegtay in ay kadileen Al-Shabaab 52 ku na dileen duqeyn
Aqriso: Liiska Xubnaha Xildhibaanada Golaha deegaanka degmada Diinsoor oo la shaaciyey.